नेवाः मुस्मां- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ३२, २०७६ हिमेश
गुठी विधेयकको विरोधमा सहभागी भइरहेको एउटा समूह छ– नेवाः मुस्मां । अर्थात्, नेवार मुस्लिम समाज । केही दिनअगाडि मात्र गठन भएको यो समाज आफ्नो वास्तविक पहिचान खोज्ने प्रयासमा छ ।
मानिसको स्वभाव नै हुँदो रहेछ, आफू को हो र के हो भनेर खोज्ने । पहिचानको खोजी भन्दा हुन्छ यसलाई । अहिले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको चारैतर्फबाट विरोध भइरहेको छ । विशेषतः उपत्यकाका नेवार समुदाय यस विधेयकको खुला विरोधमा छन् र यसलाई लिएर दिनहुँ कुनै न कुनै प्रकारले विरोध गरिरहेका छन् । यस्तै विरोध कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको एउटा समूह हो, नेवाः मुस्लिम समाज । अर्थात्, नेवार मुस्लिम समाज ।
नेपाल भाषामा भन्दा ‘नेवाः मुस्मां’ हुन्छ, नेवार मुसलमानलाई । उनीहरूले केही दिनअगाडि मात्र गठन गरेको हो, यो समाज । अहिले यही समाज आफ्नो वास्तविक पहिचान खोज्ने प्रयासमा पनि छ । मानवशास्त्री र सामाजशास्त्रीका लागि मात्र यो कम्तीको रुचिको विषय होइन, सबैका लागि उत्तिकै कौतूहलपूर्ण छ र यसले पनि देखाउने गर्छ, हामी र हाम्रो देशमा वास्तवमै कति विविधता छ र मौलिक रूपमा यो कति परिस्कृत र फरक पनि छ ।
यहाँनिर पहिलो प्रश्न हुने गर्छ, नेवार के हो त ? प्रायः के भनिन्छ भने यो जाति होइन, यो त एउटै भाषा बोल्ने समूह हो । फरक समय तथा कालमा जो जाति काठमाडौं उपत्यका छिरे र त्यसले यो भाषालाई अपनाएर आफूलाई यहाँकै बनाए, तिनै नेवार भए र हुन् । इतिहासकार तुलसीराम वैद्य भन्थे, नेवारलाई एकै स्थानमा राख्ने एउटै तत्त्व भनेको भाषा मात्र हो ।
नेवारभित्र फरक संस्कृति र संस्कार मात्र छैन, फरक धर्म पनि छ । नेवारले अभ्यास गर्दै आएका धर्ममा बढी हिन्दु र बौद्ध नै हो । त्यसपछि इसाई धर्म पनि आउँछ । नेवारमा इस्लाम धर्म मान्ने पनि छन्, यसको कम मात्र चर्चा हुन्छ । अब यिनै नेवार मुसलमानले आफ्नो पहिचानका लागि समूह गठन गरेपछि यो विषयमा अब स्वाभाविक रूपमा उत्तिकै चर्चा हुनेछ, त्योभन्दा बढी बहस पनि हुनेछ । त्यस समाजका अध्यक्ष निसार उद्दिन हुन् । यो समाजले तत्काल प्रमुख रूपमा दुई काम गर्न खोजेको छ ।
पहिलो, अब चाँडै हुने राष्ट्रिय जनगणनामा समाजले आफूहरूलाई नेवार मुसलमानका रूपमा पहिचान लेखाउनेछ । दोस्रो काम, यो समुदायका युवा पुस्तामा नेपाल भाषा बोल्ने र बुझ्न कम हुन थालेकाले अब चाँडै भाषा सिकाउने काम पनि हुनेछ । मूलतः उनीहरू नेपाल भाषामै बोलचाल गर्ने हुन् । अहिलेका बाजेबज्यैको पुस्तासम्म मज्जाले नेपाल भाषामै कुरा गरिरहेका हुन्छन् । नाति पुस्तामा आएर मात्र केही समस्या भएको हो, भाषालाई लिएर ।
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका जितेपछि हिन्दु र बौद्ध धर्म मान्ने नेवारलाई चलाउन खोजेनन्, उनी विशेषतः इसाई धर्म मान्नेप्रति कठोर भए । त्यो बेलाका इसाई नेवार देश निष्कासनमै परे र पुगे, भारतको बेतियासम्म । अझै पनि त्यहाँ इसाई नेवारको नयाँ पुस्तामाझ काठमाडौंका केही न केही संस्कृति बाँकी छ । इस्लाम मान्नेलाई भने पृथ्वीनारायणले राज्यले दिने सुविधा कटौती गरे । उनीहरूले देश नै भने छाड्नु परेन । पछि जंगबहादुरका पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनमा भने नेवार मुसलमानलाई पानी नचल्ने बनाइयो । तर त्यो कानुन न थियो, समाजले त्यसलाई स्विकार्ने काम भने गरेन । ‘नेवारभित्रै अरू समुदायले मुसलमानलाई कहिले पनि त्यसरी पानी नचल्ने जातका रूपमा लिएनन् । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो, अरू नेवार र मुसलमान नेवारको घरको धुरी जोडिएको हुन्छ । यो भनेको समानताको प्रतीक नै हो,’ नेवार मुसलमानबारे लामो समय अध्ययन गरेका रास जोशी मान्छन् ।
घना नेवार बस्तीकै बीचमा कहीं न कहीं कतै न कतै मुसलमानको एउटा घर त हुन्थ्यो नै । अधिकांश नेवारको पूजामा देवतालाई चढाउने भनेको हाँसको फुल हो । पूजामा कुखुराको फुल अहिले पनि चल्दैन । केही समयअगाडिसम्म पनि हाँसको फुल बेच्ने काम मुसलमानकै हुन्थ्यो र टोलटोलमा फुल बेच्ने क्रममा उनीहरू भन्थे, ‘खे माला... ?’ अर्थात् हाँसको फुल चाहिन्छ कि ? त्यति मात्र होइन, केही वर्षअगाडिसम्म पनि नेवार मुसलमानबीच भएको घरको अंशबन्डा र अरू कानुनी काम नेपाल भाषामै हुने गरेको थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ, कहिलेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मुसलमानहरूको प्रवेश भयो त ? दाबी त के गरिन्छ भने लिच्छिविकालमै काठमाडौं उपत्यकामा मुसलमानहरूको प्रवेश भइसकेको थियो । तर लिखित इतिहास सुरु हुन्छ, राजा रत्न मल्लदेखि । उनको पालामा व्यापार गर्ने उद्देश्यले कश्मीरका केही मुसलमान यहाँ आए । ती व्यापारीको मुख्य गन्तव्य तिब्बत थियो तर समयको अन्तरमा उनीहरू काठमाडौंमै रोकिए । इतिहासले भन्छ, नेपाल र कश्मीरबीचको सम्बन्ध निकै पुरानो हो । ती कश्मीरी मुसलमानले सुरुमा अत्तर र बहुमूल्य ढुंगाको व्यापार गरेका थिए ।
तिनै मुसलमानले रत्न मल्ललाई बाज उपहार दिएको पनि भनिन्छ । केही मुसलमान प्रताप मल्लको पालामा पनि आए । हाम्रोमा इतिहास र मिथकबीच अन्तर छुट्याउन निकै गाह्रो छ । कथाजस्तै गरेर अहिलेसम्म पनि सुनाउँदै आइएको के छ भने यी मुसलमानले प्रताप मल्ललाई एउटा जादु देखाए र त्यसबाट उनी खुबै प्रभावित भए । त्यस जादुका क्रममा रानीपोखरीको हात्ती नै केही समयका लागि गायब गरिदिएका थिए । पछि प्रताप मल्लले त्यसैकारण जमलतिर मस्जिद बनाउन जग्गा दिएको पनि भनिन्छ ।
यी दुई फरक कालखण्डमा भित्रिएका मुसलमानसँगै अत्तर र बहुमूल्य ढुंगाको व्यापार मात्र भित्रिएन, जादु, झारफुक विद्या, घोडचढी, उस्ताजसहितको गायन पनि भित्रियो । कालान्तरमा उनीहरूले बोल्ने पनि नेपाल भाषा भयो । उनीहरूको घर पनि पारम्परिक नेवारकै जस्तो हुन थाल्यो । उनीहरूको अर्को प्रभाव नेवारको खाना, आभूषण र लुगामा पनि उत्तिकै पर्‍यो ।
‘मुसलमानको ताबिजबाटै नेवारको लोकप्रिय गहना ताय बनेको हो । उनीहरूले नै काठमाडौंमा चुरा पोते, मेहेन्दी पनि ल्याए,’ जोशी मान्छन् । उनले ०७१/०७२ तिर गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा हजारको हाराहारीमा नेवार मुसलमान छन्, जसले आफ्नो नाम पछाडि प्रायः सय्यद, ख्वाजा, पट्ठान, मियाँ र खान प्रयोग गर्छन् । भित्री नेवारको बस्तीमध्ये उनीहरू काठमाडौंमा प्रायः जनबहाल, छत्रपाटी, वटु र इन्द्रचोकमा छन् । ललितपुरमा गाबहाल र मंगलबजारतिर छन् । यस्तै भक्तपुरमा भने गोलमढीको वरिपरि ।
उनीहरू अरू नेवारजस्तै यहाँका चाडपर्वमा सहभागी हुन्छन् । घरमै समयबजी ज्वर्ने र खाने पनि गर्छन् । चटामुरी पनि खान्छन्, छ्वयला पनि खान्छन्, आलुका परिकारको मज्जा पनि लिन्छन् । भोजतिर पनि सजिलै सहभागी हुन्छन् । फरक धेरै अर्थमा मासुमा हुन्छ । नेवार मुसलमान पनि हलाल गरिएको मासु मात्र खान्छन् ।
त्यसैले उनीहरूले मुसलमानले चलाएका पसलबाट मात्रै मासु किन्ने गर्छन्, हलाल गरिएका । अहिले अधिकांश नेवार मुसलमानको व्यापार भनेको चुरापोतेकै हो र यसको केन्द्रविन्दु रहेको छ, इन्द्रचोकको प्रसिद्ध राखी बजार । केसम्म भनिन्छ, भने यसको खास नाम इराकी बजार थियो, किनभने केही मुसलमानका पुस्ता इराकबाट आएका थिए । पछि यसको नाम राखी बजार भयो । मीठो संयोग के भने यस बजारका अधिकांश ग्राहक भने हिन्दु हुने गर्छन् । चुरा–पोते शौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ र त्यसका लागि हिन्दुहरू मुसलमानको बजारमा निर्भर छन् ।
यहाँनिर थप्नुपर्ने एउटा अर्को विषय पनि छ । यो संयोगले फुटबलसँग जोडिएको छ । राणा शासनको अन्त्यतिर नेपालमा फुटबल भित्रिएको थियो । पछि त्यो आम जनताले रुचाएको खेल पनि भयो । राणा शासनको अन्त्यसँगै टोलटोलमा फुटबल टिम बन्न सुरु भयो । यसै क्रममा इन्द्रचोकमा पनि एउटा टिम बनेको थियो, जसका सबै खेलाडी मुसलमान थिए । त्यो टिमले खुबै तहल्का मच्चाएको पनि थियो, लामो समयसम्म । यसकै एक खेलाडी हुन्, अफताब उद्दिन ।
सन् १९६३ मा नेपालले आगा खाँ गोल्डकप खेलेको थियो र यसलाई नै नेपाल सहभागी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता मानिन्छ । यसको आयोजना गरेको थियो, अहिलेको बंगलादेशले । त्यति बेला बंगलादेशलाई पूर्वी पाकिस्तान भनिन्थ्यो । त्यस टिममा पनि परे, तिनै उद्दिन । उनी डिफेन्डर थिए । अहिले पनि उनलाई भेट्नुपर्छ, एउटा मुसलमानको छवि जुन मनमा आउँछ, त्यो उनमा पाइन्न । बरु उनी देखिन्छन्, ठ्याक्कै आम नेवारजस्तै । यस्तै मुसलमानहरू अहिले आफ्नो पहिचानको खोजीमा छन्, नेवाः मुस्मांका रूपमा ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ११:५७
जेष्ठ ३१, २०७६ हिमेश
एल्टन जोनका गीतमध्ये धेरै भन्दा धेरै रुचाइएकामा पर्छ, ‘रकेटम्यान’ । ‘रकेटम्यान’ नामकै एउटा काल्पनिक कथाबाट प्रभावित भएर उनले यो गीत लेखेका हुन् भनिन्छ । मंगलग्रह जान लागेका एक एस्ट्रोनटसँग एकै समय दुई फरक विचार हुन सक्छ, एकातर्फ मंगलग्रह जान लागेको खुसी, अर्कोतर्फ आफ्नो परिवारबाट टाढा रहनु पर्ने पीडा ।
यो गीतमा त्यसकै भाव पाइन्छ । ‘द म्युजिकल जर्नी अफ एल्टन जोन’ नामको किताबमा उनका धेरै गीतबारे वर्णन छ र त्यसमा यही खास गीतबारे पनि लामै लेखिएको छ ।
सन् १९७२ को गीत हो, यो । अहिले तत्काल यो गीतको चर्चा किन भन्दा सन् २०१९ को एउटा सफल बायोग्राफिकल फिल्म नाम हो, ‘रकेटम्यान’ । इतिहासका एक प्रमुख पात्रलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता फिल्म बनाउने गरिन्छ र यसमा केही मसला पनि थपिने गरिन्छ, जसको सिधा सम्पर्क त्यो व्यक्तिसँग हुने गर्दैन् । ‘रकेटम्यान’ एल्टन जोनबारे बनाइएको त्यो फिल्म हो, जसलाई केही नाटकीय बनाउन केही मसला मज्जाले थपिएको छ ।
अझ सिधै भनौं, ‘रकेटम्यान’ एल्टन जोनका विवादित पक्षसमेत बनाएको फिल्म नै हो र अहिले यसले पश्चिमतिर धुम मच्चाइरहेको छ । यसका निर्देशक हुन्, डेक्टर फ्लेटचर । जोनको मुख्य भूमिकामा छन्, टारोन एगरटन । रोयल एकेडेमी अफ म्युजिकसँग जोडिएयता जोनको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ र उनले बर्नी टउपिनसँग गज्जबको संगीत साझेदारी बनाउँछन् । यो फिल्म त्यसैबारे छ । सन् २००१ मै यो फिल्म बनाउने सोच तयार भएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सन् २०१९ सम्म पर्खनु पर्‍यो ।
केन्स फिल्म फेस्टिबलका बेला यसलाई प्रिमियर गरिएको थियो, मे १६ मा । त्यसका एक साताको अगाडि पछाडि यो इंग्ल्यान्ड र अमेरिका दुवैतिर रिलिज पनि भयो । यसै साता यसले कमाएको १० करोड डलर बढी भएको छ, त्यसैले यसलाई व्यावसायिक रूपमा सफल भन्न सुरु भएको छ । धेरैले एगरटनको अभियनलाई रुचाएका छन्, आलोचकहरू उनको अभियनलाई प्रशंसा गर्न केही शब्द खर्चन कन्ज्युस्याइँ गरेका छैनन् । एल्टन जोनको यौन धारणा सबैलाई थाहा छ, उनी समलिंगी हुन् । त्यसैले यो हलिउडको त्यस्तो ठूलो फिल्म भएको छ, जसमा पुरुष समलिंगी यौन सम्पर्कलाई देखाइएको छ । पछिल्लो समय संगीतकर्मीको जीवनसँग जोडिएर उनको कथामा बायोपिक बनाउने क्रम बढ्दो छ । केही समय अगाडि मात्र क्विन ब्यान्डको पूरा कथामा आधारित यस्तै बायोपिक खुबै सफल भएको थियो । त्यो ‘बोहेमन रापसोडी’ ले झन्डै ९० करोड डलर बढी आय गरिसकेको छ ।
‘रकेटम्यान’ त्यो जत्तिको धेरै खर्च गरेर बनाइएको फिल्म होइन । तर यसले लगानीअनुसार उत्तिकै राम्रो आम्दानी भने गरिसकेको छ । ‘रकेटम्यान’ लाई संगीतकर्मीको जीवनमा आधारित फिल्ममध्ये उत्कृष्ट १० मा समेत समावेश गर्ने काम भइसकेको छ र यसले आउने केही दिनमा अझ कमाउने आशा पनि गरिएको छ । ‘बोहेमन रापसोडी’ भन्दा केही फरक पनि छ, ‘रकेटम्यान’ । यसमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर हो, यो एल्टन जोन जीवित छँदै रिलिज भएको छ । त्यसमाथि एल्टन जोनले सक्रिय संगीतकर्मीको जीवनबाट लगभग संन्यास जस्तै लिने सोचमा पुगिसकेका छन् र उनले घोषणा नै गरिसकेका छन्, अबको टुर अन्तिम हुनेछ भनेर । अब उनी बिदा लिँदैछन् । उनले टुरमै ५० वर्ष बिताइसके । यौनबारे उनका विचारका पनि उत्तिकै चर्चित छन् । खासमा उनी ‘सेम सेक्स म्यारिज’ का समर्थक हुन् । उनी आफ्ना पार्टनरलाई ‘हजब्यान्ड’ नै भन्न रुचाउँछन्, पार्टनर होइन । उनको यही जीवनको केही न केही झल्को ‘रकेटम्यान’ मा पाइन्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:५७